China Car ရေခဲသေတ္တာ YC-16SS စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ | Yuancheng
Yuancheng အိတ်ဆောင်ရေခဲသေတ္တာရေခဲသေတ္တာ 12V ကားရေခဲသေတ္တာမော်တော်ယာဉ်ထရပ်ကားအတွက် Compressor တို့ထိမျက်နှာပြင်ပါသောရေခဲသေတ္တာ RV စခန်းချခရီးသွားခြင်းအပြင်ဘက်မောင်းနှင်မှု
ပစ္စည်း ABS + PCM သံမဏိ
ထုပ်ပိုးခြင်း - စိတ်ကြိုက်သေတ္တာ
Moq: ၁၀ ယူနစ်
Yuancheng ခရီးဆောင်ရေခဲသေတ္တာရေခဲသေတ္တာ 12V ကားရေခဲသေတ္တာ မော်တော်ယာဉ်ထရပ်ကား RV Camping ခရီးသွားခြင်းအတွက်အပြင်ဘက်မောင်းနှင်မှုအတွက် Compressor တို့ထိဖန်သားပြင်နှင့်အတူကားရေခဲသေတ္တာ
YC-16SS DC ကားရေခဲသေတ္တာ
ထုတ်ကုန်အမည်: 16L, DC ကားရေခဲသေတ္တာ
ရာသီဥတုအမျိုးအစား: SN, N, ST, T က
ဗို့အား: DC12V / 24V
အပူအပူချိန်: 20-55 ℃
ရေခဲသေတ္တာအပူချိန်: -20 ℃
ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား: 605 * 340 * 273.5mm
ပုံးအရွယ်အစား: 660 * 395 * 360mm
ပမာဏတင်ပါ 20Ft / 288PCS 40HQ / 693PCS
အရေအတွက် (အပိုင်းအစများ) ၁ - ၁၀ ၁၁ - ၁၀၀ 101 - 200 > 200
အီးအက်စ်တီ။ အချိန် (နေ့များ) 25 35 45 ညှိနှိုင်း
ထုပ်ပိုးခြင်း - ရေခဲသေတ္တာတစ်ခုစီကိုပလတ်စတစ်အိတ်ဖြင့်ထုပ်ပြီးအကာအကွယ်အမြှုပ်များဖြင့်ဖြူသောသေတ္တာထဲထည့်ပါလိမ့်မည်။ ထို့နောက်ဘူးဖြူပါသောကုန်ပစ္စည်းများကိုမာစတာပုံးထဲသို့ထုပ်ပါလိမ့်မည်။
အင်္ဂါရပ်များ & အသေးစိတ်အချက်အလက်များ:
[ကြီးမားသောစွမ်းဆောင်နိုင်မှု] - ဤခရီးဆောင်ရေခဲသေတ္တာသည်အစားအစာနှင့်သောက်စရာ ၂၀ လီတာအထိရှိသည်။ ၎င်းတွင်သင်သည်များစွာသောသောက်စရာများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်သစ်သီးများကိုသိုလှောင်နိုင်သည်။ သေးငယ်တဲ့ပါတီသို့မဟုတ်ပျော်ပွဲစားစားရန်အဘို့အလုံလောက်ပါတယ်။
[အဆင်ပြေသောလုပ်ဆောင်မှု] - အဆင့်မြင့် compressor သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်မှုကိုအာမခံသည်။ အတွင်းပိုင်းအပူချိန်ကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြသနိုင်သည့်အီလက်ထရောနစ်အပူချိန်ထိန်းချုပ်ရေးနေရာနှင့်လိုအပ်သောအမျိုးမျိုးသောလိုအပ်သည့်အပူချိန်ကိုသတ်မှတ်ပါ။ battey လုပ်ဆောင်ချက်ကိုဖွင့်ပြီးပိတ်ရန်ဘက်ထရီထိန်းချုပ်ခလုတ် ၂ ခု
[PREMIUM MATERIAL] - ကြာရှည်ခံ။ အဂတိလိုက်စားမှုကင်းသောအပြင်ဘက်၊ ဖလိုရိုက်မကင်းသောကာကွယ်ခြင်းနှင့်တံဆိပ်ခတ်ထားခြင်းက၎င်းကိုထိထိရောက်ရောက်အေးခဲစေပြီးကောင်းမွန်သောအပူထိန်းသိမ်းမှုစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်။ အပူဖြုန်းဘို့ရေတိုင်ကီတပ်ဆင်ထားသည်။
[လူသားအခြေခံဒီဇိုင်း] - ဤရေခဲသေတ္တာတွင်ဘက်ထရီနှင့်ဗို့အားကာကွယ်မှုစနစ် ၃ ခုပါ ၀ င်သောကြောင့်ဘက်ထရီယိုစီးမှုမှကာကွယ်ရန်နှင့်ယာဉ်အားကာကွယ်ပေးသည်။ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသောအဘို့အ lifting လက်ကိုင်နှစ်ခုနှင့်လွယ်ကူသောပွင့်လင်းများအတွက်ပါဝင်သည်။
[ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုခြင်း] - အိတ်ဆောင်ရေခဲသေတ္တာတွင်ပါဝါကြိုး ၂ ခုပိုင်ဆိုင်သည်။ တစ်ခုမှာ ၁၂/၂၀ ဗို့စီကားဘက်ထရီမှစွမ်းအင်ကိုခွင့်ပြုသည်၊ အခြားတစ်ခုမှာ 110V မှ 240 V AC ပါဝါထည့်သွင်းမှုကိုအိမ်တွင်းတွင်ဆက်သွယ်ပေးသည်။ ပြည်တွင်းနှင့်ကားအသုံးပြုရန်အတွက်သင့်တော်သည်။
တစ် ဦး ကကားတစ်စီးရေခဲသေတ္တာသူတစ်စုံတစ် ဦး အဘို့အအကောင်းဆုံးဝယ်ယူရန်ဖြစ်ပါတယ် သူတို့၏ကားထဲတွင်အချိန်များစွာကုန်ဆုံးသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ဖြစ်စေ၊ အများအားဖြင့်ပျက်စီးခြင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်အအေးမိခြင်းများဖြစ်နိုင်သည့်အစားအစာများကိုစားသုံးခြင်းသည်မည်မျှကောင်းသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အများစုကမေ့သွားကြသည်။
ဤရေခဲသေတ္တာများကိုလူသိများကြသည် ခရီးသွားအအေး နှင့်အခြားအသုံးပြုမှုများအတွက်အလွန်ကြီးစွာသောဖြစ်ကြသည်။ ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ဒီရေခဲသေတ္တာအများစုဟာဖြစ်နိုင်တယ် AC / DC adapter နဲ့ချိတ်ထားတယ် မြို့ရိုးအ plug ကိုသို့သို့မဟုတ်အစားအသုံးပြုပါ သင့်ကားထဲတွင် 12V plug ပေါ့ပါးခြင်းနှင့်အတူ။
ရှေ့သို့ Hard ထိပ်တန်းဖြောင့် -up, ခေါင်မိုးတဲ
နောက်တစ်ခု: ကားရေခဲသေတ္တာ YC-30SS
12 Volt ကားရေခဲသေတ္တာ
12v Car ရေခဲသေတ္တာ Cooler
Mini ကားရေခဲသေတ္တာ Cooler
YC-40SS DC CAR ရေခဲသေတ္တာထုတ်ကုန်အမည်: 40L DC ကားရေခဲသေတ္တာရာသီဥတုအမျိုးအစား: SN, N, ST, T ဗို့အား: DC12V / 24V ရေခဲသေတ္တာ: R134a ရေခဲသေတ္တာအပူချိန်: -20 ℃ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား: 675 * 380 * 390mm Carton အရွယ်အစား: 725 * 430 * 440mm Load ပမာဏ 20Ft / 210PCS 40HQ / 516PCS လုပ်ဆောင်ချက် - ၁။ Truck Car Cooler / Car Refri / ခရီးဆောင်ကားအသေးစားရေခဲသေတ္တာ / mini ရေခဲသေတ္တာရေခဲသေတ္တာ / အပြင်ဘက်တွင်တပ်ဆင်ထားသော Car Cooler ကား Refri 2. စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်မှာ 12V / 24V / 220V အတွက်ဖြစ်နိုင်သည် ကားရောအိမ်ရောပါ ...
YC-50SS DC CAR ရေခဲသေတ္တာထုတ်ကုန်အမည်: 50L DC ကားရေခဲသေတ္တာရာသီဥတုအမျိုးအစား: SN, N, ST, T ဗို့အား: DC12V / 24V ရေခဲသေတ္တာ: R134a ရေခဲသေတ္တာအပူချိန်: -20 ℃ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား: 675 * 380 * 445mm Carton အရွယ်အစား: 725 * 430 * 505mm Load ပမာဏ 20Ft / 168PCS 40HQ / 430PCS လုပ်ဆောင်ချက် - ၁။ Truck Car Cooler / Car Refri / ခရီးဆောင်ကားအသေးစားရေခဲသေတ္တာ / mini ရေခဲသေတ္တာရေခဲသေတ္တာ / အပြင်ဘက်တွင်တပ်ဆင်ထားသော Car Cooler ကား Refri 2. စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်မှာ 12V / 24V / 220V အတွက်ဖြစ်နိုင်သည် ကားနဲ့အိမ်ရောနှစ် ဦး စလုံး ...
Yuancheng 60L အိတ်ဆောင်ကားရေခဲသေတ္တာ Mini Cooler / ရေခဲသေတ္တာစခန်းထုတ်ကုန်အမည်: 60L DC ကားရေခဲသေတ္တာရာသီဥတုအမျိုးအစား: SN, N, ST, T ဗို့အား: DC12V / 24V ရေခဲသေတ္တာ: R134a ရေခဲသေတ္တာအပူချိန်: -20 ℃ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား: 675 * 380 * 520mm Carton အရွယ်အစား: ၇၂၅ * ၄၃၀ * ၅၇၀ မီလီမီတာ ၀ န်ထုပ်မှုပမာဏ 20Ft / 168PCS 40HQ / 344PCS အရည်အသွေးမြင့်မားသောဤခရီးဆောင်ကားရေခဲသေတ္တာသည်သင်၏ရေခဲသေတ္တာ / အအေးလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။ အဲဒါငါ ...
YC-30SS DC CAR ရေခဲသေတ္တာထုတ်ကုန်အမည်: 30L DC ကားရေခဲသေတ္တာရာသီဥတုအမျိုးအစား: SN, N, ST, T ဗို့အား: DC12V / 24V ရေခဲသေတ္တာ: R134a ရေခဲသေတ္တာအပူချိန်: -20 ℃ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား: 675 * 380 * 325mm Carton အရွယ်အစား: 725 * 430 * 375mm Load ပမာဏ 20Ft / 252PCS 40HQ / 602PCS လုပ်ဆောင်ချက် - Compressor Car Mini ရေခဲသေတ္တာအိမ်ရေခဲသေတ္တာ 24V / 12V / 110-240V (30L) Car Cooler Car Refri 1. စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်သည်ကားနှင့်အိမ်နှစ်ခုလုံးအတွက် 12V / 24V / 220V ဖြစ်နိုင်သည်။ အသုံးပြုသည်။ ၂ ။
လူကြိုက်များသောကားခေါင်မိုးတဲ, Car Wine Cooler, 12v Car ရေခဲသေတ္တာ Cooler, Mako ကားအအေး, ခရီးဆောင်ကားအအေး 12v, ကားအောက်မှာဖုံးပါ,